Otú Ndị Na-agba Ịnyịnya Anọ Si Gbasa Gị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mbunda Mexican Sign Language Mizo Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A | OTÚ NDỊ NA-AGBA ỊNYỊNYA ANỌ SI GBASA GỊ
E nwere nnukwu ịnyịnya anọ e kwuru okwu ha n’akwụkwọ Mkpughe. Ha na-awụ oké ọsọ, ụkwụ ha na-adakwa oké ụda ka ha na-agba. Ị gụọ otú Baịbụl si kọwaa nnukwu ịnyịnya anọ ahụ na ndị na-agba ha, ọ ga-adị gị ka ì ji anya gị na-ahụ ha ka ha na-agbafe. Ịnyịnya nke mbụ na-acha ọcha. Onye na-agba ya bụ onye dị ebube e chiri eze ọhụrụ. Ịnyịnya nke na-eso ya na-acha uhie uhie, e nyekwara onye na-agba ya ikike iwepụ udo n’ụwa. Ịnyịnya nke atọ sochiri ya na-eji ezigbo oji ka ọchịchịrị. Onye na-agba ya ji ihe e ji atụ ihe n’aka. A nụkwara ozi ọjọọ nke na-ekwu na nri ga-adị ụkọ. Ahụ́ ịnyịnya nke anọ chanwụrụ achanwụ. Onye na-agba ya bụ ọnwụ. Ọ ga-eji ọrịa na ihe ndị ọzọ dị njọ na-egbu ndị mmadụ. Ili sochiri ya, ọ na-elokwa ọtụtụ mmadụ.—Mkpughe 6:1-8.
“Ezigbo ụjọ tụrụ m mgbe mbụ m gụrụ gbasara ndị na-agba ịnyịnya anọ ahụ. Obi m gwara m na Ụbọchị Ikpe eruwela, nakwa na agaghị azọpụta m ebe ọ bụ na ejikerebeghị m.”—Crystal.
“Obi tọrọ m ezigbo ụtọ mgbe m gụrụ gbasara ndị na-agba ịnyịnya anọ ahụ ụcha ha dị iche iche. Mgbe m ghọtara ihe ọhụụ ahụ pụtara, m chọpụtara na ihe e kwuru banyere ha bụ eziokwu.”—Ed.
Mgbe ị gụrụ gbasara ndị na-agba ịnyịnya anọ ahụ, ọ̀ dị gị otú ahụ ọ dị Crystal, ka ọ̀ bụ otú ahụ ọ dị Ed? N’agbanyeghị otú ọ dị gị, akụkọ a so n’otu n’ime akụkọ ndị magburu onwe ya a kọrọ n’akwụkwọ ikpeazụ nke Baịbụl, bụ́ Mkpughe. Ị̀ ma na ịghọta ọhụụ a ga-abara gị uru? Olee otú ọ ga-esi bara gị uru? Chineke kwuru na ị ga-enwe ezigbo obi ụtọ ma ị gụọ akwụkwọ Mkpughe, mụọ ya nke ọma, ma na-eme ihe ndị e kwuru na ya.—Mkpughe 1:1-3.
Anyị ahụla na ụjọ na-atụ ụfọdụ ndị ma ha gụọ gbasara ndị na-agba ịnyịnya anọ ahụ e kwuru gbasara ha n’akwụkwọ Mkpughe, ma o kwesịghị ịtụ mmadụ ụjọ. Nke bụ́ eziokwu bụ na ọtụtụ nde mmadụ achọpụtala na ọhụụ a emeela ka okwukwe ha sikwuo ike, meekwa ka ha nwee ezigbo olileanya. O nwekwara ike imere gị otu ihe ahụ. Biko, gụọ isiokwu na-esonụ ka ị hụ otú ọ ga-esi mee.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú Ndị Na-agba Ịnyịnya Anọ Si Gbasa Gị
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Otú Ndị Na-agba Ịnyịnya Anọ Si Gbasa Gị
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Otú Ndị Na-agba Ịnyịnya Anọ Si Gbasa Gị
ỤLỌ NCHE Otú Ndị Na-agba Ịnyịnya Anọ Si Gbasa Gị